Mudanayasha baarlamaanka Puntland oo ansixiyey dhismaha guddiga doorashada & shuruucda doorashada Puntland. – Radio Daljir
Garowe, Nov 22 – Mudanayaasha golaha wakiilada Puntland ayaa dood iyo munaaqasho kadib ansixiyey guddiga doorashada iyo xeerka doorashada Puntland.
Afhayeenka baarlamaanka Puntland Md. C/rashiid M. Xirsi oo ka hadlay codaynta mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in goluhu uu maalmo ka doodayey qodobada guddiga doorashada iyo shuruucda doorashada, ay su’aalo ka weydiiyey wasiiru dawlha dastuurka & arrimaha federaalka Dr. Jimcaale, ayna intaa kadib u codeeyeen ansixinta guddiga doorashada.
32 ka mid mudanayaasha baarlamaanka ayaa cod kalsooni ah siiyey dhismaha guddiga doorashada, halka tobaneeyo kale ay ka aamuseen.
Guddiga doorashada Puntland ayaa u xil saaran dejinta shuruucda doorashada, gooraynta doorashada, hirgelinta iyo go’aaminta natiijooyinka doorashada oo la filayo in Puntland laga hirgaliyo sannadka 2012.
Guddiga doorasha ee ku meel gaarka ah ayaa ka koobnaan doona 9 xubnood oo 5 ka mid ah uu magacaabi doono M/weyne Faroole, halka 4-ta kalena uu magacaabi doonaan baarlamaanka Puntland.
Afti dadweyne oo loo qaado dastuurka Puntland, dhismaha axsaabta siyaasadeed, doorashada golayaasha deegaanka, mudanayaasha baarlamaanka, iyo madaxda Puntland ayaa ay tahay in la hirgaliyo 2-da sano ee u harsan xukuumada Puntland ee M/weyne Faroole & Gen. C/samad Cali Shire.
Waxaa jiray isku dayo hore oo ahayd in lagu hirgaliyo barnaamijka dimuqraadiyaynta Puntland, aanse hirgelin.
Baarlamaanka ayaa hore u ansixiyey dastuurka Puntland.